युवाहरुले केपि ओली”I love You”भन्दा बृद्धाहरुले “आलुको बिउ”भन्दै समर्थन गरे किन होला? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. युवाहरुले केपि ओली”I love You”भन्दा बृद्धाहरुले “आलुको बिउ”भन्दै समर्थन गरे किन होला? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
युवाहरुले केपि ओली”I love You”भन्दा बृद्धाहरुले “आलुको बिउ”भन्दै समर्थन गरे किन होला?
हिजो युवाहरुले केपि ओली”I love You”भन्दा बृद्धाहरुले “आलुको बिउ”भन्दै समर्थन गरे किन होला ? सबैलाई यो सुन्दा मज्जाक लाग्ला । कसैलाई त यो केपि ओलीको विपक्ष रहेछ भन्ने पनि लागेको होला। तर यथार्थ यस्तो रमाईलो छ । कृपया यो यथार्थ कुरा भएकाले ट्रोलको रुपमा नबुझ्नुहोला ।
हिजो केपि ओलि समपर्थक द्वारा काठमाडौको नारायणहिटिमा आयोजना गरिएको बृहत् शक्ति प्रदर्शनमा देश भर बाट लाखौको संख्यामा जनताको सहभागिता रहेको थियो । त्यहि क्रममा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको बिषय छ एउटा नारा “केपि ओलि I Love You ” । अर्थात केपि ओलिको समर्थनमा बिशेष माया व्यक्त गरिएको थियो ।
लाखौ मानिसहरुको हुलमा यो नारा निकै चर्चित बनेको थियो । युवाहरुले बुझेर नै यो नारा लागाए कतिले त टिकट्कमा भाईरल पनि बनाए ।
युवाहरुको जमातको बिचमा हामीले केही बृद्धा बुवाआमाहरु पनि भेटेउ जस्मा बुवा आमालाई केपि ओलि I LOVE you भनेको अर्थ नै थाहा थिएन । उहाहरुलाई अङ्ग्रेजीमा के भनेको होला भन्ने प्रश्न मनमा उठिराखेको थियो । जुलुसमा आएपछी समर्थन गर्नुनै पर्यो भनेर बृद्धा बुवा आमाहरुले सङै यो नारालाई आलुको बीउ भनेको होला भन्ने बुझ्नुभएछ र समर्थन गर्नुभएछ । हामी ट्यक्कै त्यहि बेलामा त्य्हा पुग्यौ र बुवा आलुको बीउ हैन अङ्ग्रेजीमा I Love You भनेको माया गर्छौ प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो बुवा भनेको उहाले यस्तो जवाफ दिनुभयो ।
बिस्तारै के बुझ्नुभएछ बुवाले भनेर बुझ्ने प्रयास गर्यौ। बुवा भन्नुहुन्छ मलाई अङ्ग्रेजी आउदैन म पढेको पनि केही छैन बाबू । घर गाउमा एउटा राम्रो आलु लगाउदा बीउ राम्रो भयो भने एउटा आलुको बोटमा १० ओटा आलु फल्छ। एउटा राम्रो आलुको बिरुवाले १० गुना राम्रो गर्छ त्यस्तै एउटा राम्रो आलु केपि ओलि राम्रो भएको भएर ओलिलाई सबैले आलु बन्नुपर्छ देशलाई फस्टाउने गरेर बिकास गर्ने जस्तै भनेर आलुको बीउ भनेको भएर मैलेनी केपि ओलि आलुको बीउ भन्दिए के म गलत छु र उहाँ भन्नुहुन्छ ।
उहाको बुझाई पनि सहि हो राम्रो एउटा नेता भयो भने सबै अरु राम्रा हुन्छ्न । अर्थात प्रधानमन्त्री केपि ओली उहाहरुको लागि राम्रो नेता हुनुहुन्छ त्यसैले सबैले राम्रो बीउ भनेर तारिफ गरेका होलान भनेर उहाले पनि युवाले भन्दा चर्को चर्को आलुको बिउ आलुको बीउ भनिदिनुभयो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको February 6, 2021 February 6, 2021 23 Viewed